Iindaba -Umahluko phakathi kwesampula yesilicone kunye nokuvunda kwemveliso
Uyawuqonda umahluko phakathi kwesampula yesilicone kunye nokuvunda kwemveliso?
Kwimveliso ye-silicone yeemveliso, xa kukho abathengi abatsha kuphando lwethu ukuxoxa ngentsebenziswano, siya kubuza abathengi ukuba ingaba le mveliso ye-silica inesikhunta na, ukuba akukho mngundo, kufuneka sicaphule ukuvula ukungunda, isicatshulwa esivulwa ngokubanzi yahlulwe ukuvula isampulu locaphulo ngumngundo kunye nemveliso sokubumba locaphulo, ngoko kutheni sifuna iintlobo ezimbini locaphulo sokubumbela? Uthini umahluko phakathi kwesampulu yomngundo kunye nemveliso yokubumba yeemveliso zesilicone? I-Chengda irabha kunye neeplastiki zikuzisa ukuba uqonde!
Ukuqonda umahluko phakathi kwesampulu yomngundo kunye nemveliso yokubumba yeemveliso zesilicone, kufuneka siqale siqonde ukuba sithini isampulu kwaye yintoni ukungunda kwemveliso. Apha, ndiza kukuchazela ukuba isampulu yokubumba iyinyani yokubumba i-silica gel mold ngokukodwa esetyenziselwa ukubonakalisa. Kananjalo ingenza umsebenzi wemveliso yokubumba, kodwa eyona nto ibalulekileyo kukubonisa abathengi ukuba ingaba umgangatho, inkqubo kunye nemilo yeemveliso zethu zilungile na, oku kuyinyanda yesampulu ayinakuveliswa, kwaye ukungunda kwemveliso kungasetyenziselwa ukubumba ukuveliswa kweemveliso ze-silica gel. Eyona njongo yayo kukuyifaka kwinkqubo yemveliso, endaweni yokuqinisekisa iimveliso zabathengi. Ilitye lesikhunta semveliso yimveliso eguqulweyo ngokuguqula ubungakanani beemveliso ze-silica gel ngokwesiseko sokubumba kwesampulu.
Umahluko phakathi sokubumbela isampuli kunye nokuvunda imveliso kukuba umngundo isampuli kwakhona ukugqibezela vulcanization yokubumba, kodwa isikhunta isampuli kuphela ukugqibezela hayi ngaphezulu kwe-5 imveliso imveliso yokubumba, lo gama ukungunda imveliso ukugqibezela amakhulu umsebenzi yokubumba. Ukongeza, kwimeko yokwenziwa kwesikhunta, imveliso yokubumba ikakhulu ithathela ingqalelo ukuguqulwa komngundo kamva, Kwaye eyona nto iphambili ekubunjweni komngundo yimveliso, ngumgangatho!